Puntland oo faahfaahisay shir dhawaan ka furmi doona Garoowe - BANDHIGA
Dowlad Goboleedka Puntland ayaa ka warbixiyay halka uu marayo shirka wadatashiga Puntland oo lagu wado in todobaadka dambe uu ka furmo Magaalada Garowe.
Wasiirka arrimaha gudaha Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Dhabancad, ayaa sheegay in shirkaasi sidii loogu talagalay u socdo islamarkaana qorshaha shirkaasi yahay mid diyaarsan.
Siyaasiyiin hore iyo wakiillo ka socda dowlad Goboleedka Puntland iyo ku matalayaasha Federaalka ayaa lagu wadaa in shirkaas uga qeybgalaan Garowe.
Shirka ayaa furmaya 15ka Bishan March,waxaana shaaciyay Madaxeynaha Puntland Siciid Cabdullahi Deni oo ay is hayaan Dowladda Federaalka ah.
Dagaal Culus Oo Ka Soconaya Dalka Myanmar